मोदीसँग प्रचण्डको आग्रह : खोप दिनुभयो धन्यवाद, लोकतन्त्रलाई समर्थन होस् – Kantipur Np
मोदीसँग प्रचण्डको आग्रह : खोप दिनुभयो धन्यवाद, लोकतन्त्रलाई समर्थन होस्
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०९, २०७७ समय: ११:५८:२२
९ फागुन, काठमाडौं । भारतले नेपाललाई लाखौं डोज खोप उपलब्ध गराएकोमा नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशले समर्थन नगर्ने विश्वाससमेत प्रचण्डले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको पनि साथ रहेको भन्ने सुनिन्छ, संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको कदमलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिले समर्थन गरेजस्तो लाग्छ ? खासगरी, छिमेकी भारतले नेपालमा संसद पुनस्र्थापना होस् भन्ने चाहेको छ वा मध्यावधि चुनाव ? तपाईंलाई यसमा के लाग्छ ?
केपीजीलाई त्यो लागेको हुन सक्छ । केही गतिविधिहरू हेर्दा त्यो देखियो पनि । अन्तराष्ट्रिय शक्तिले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रममा पर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ । दुई/चार महिनायताको आवत–जावत बसउठ हेर्दा कहीँ त्यस्तो हो कि भन्ने त लाग्छ । तर, म के ठान्छु भने हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले नेपाली जनताको अभिमत, भावना र चाहनालाई सम्मान गर्छन् । कुनै एउटा व्यक्तिको निम्ति जनभावना, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संविधानको मर्मविपरीत कोही जान सक्छन् भन्ने लाग्दैन ।
५ पुसमा ओलीजीले संसद विघटन सिफारिस गरेदेखि नै मैले लगातार भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, जो नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि आओस्, स्थिरता होस्, विकास र समृद्धितिर जाओस् भन्ने चाहेका छन्, ती सबैले यो विघटनको विरोध गर्नुपर्छ भनेर मैले अपील गर्दै आएको पनि छु । अन्ततः ती शक्तिहरू पनि नेपाली जनमतभन्दा बाहिर जान सक्छन् भन्ने लाग्दैन । विगतका अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ ।
तर, अन्ततःगोत्वा सम्बन्धित देशका जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । हामीले विगतमा पनि देखेका छौं नि, कहिलेकाही छिमेकीहरूले अलि बेग्लै ढंगले गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए । तर, नेपाली जनता सडकमा आएर हामी त लोकतन्त्रै चाहन्छौं, गणतन्त्रै चाहन्छौं भनिसकेपछि कैयौं कूटनीतिकज्ञहरूले, छिमेकीहरूले नेपाली जनता जहाँ छन्, हामी त्यहीँ छौं भनेर वक्तव्य दिएका इतिहास त ताजै छन् ।
तपाईंले माघ २८ गते काठमाडौंको आजसभामा भारत लगायतका अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आह्वान गर्नुभयो । त्यसो भनेर आन्तरिक मामिलामा भारतलाई हस्तक्षेपका लागि गुहारेजस्तो भएन र ?
Last Updated on: February 21st, 2021 at 11:58 am